နယ်သာလန် ခြင်္သေ့ တွေနောက်ကျဂိုးနဲ့ အောင်ပွဲခံခဲ့ပြန်တဲ့ ကာဒစ်ကွင်းက ပြန်လည်လာမယ့် အတုံ့အလှည့်.... - YTV Channel
Home | Sports | နယ်သာလန် ခြင်္သေ့ တွေနောက်ကျဂိုးနဲ့ အောင်ပွဲခံခဲ့ပြန်တဲ့ ကာဒစ်ကွင်းက ပြန်လည်လာမယ့် အတုံ့အလှည့်….
နယ်သာလန် ခြင်္သေ့ တွေနောက်ကျဂိုးနဲ့ အောင်ပွဲခံခဲ့ပြန်တဲ့ ကာဒစ်ကွင်းက ပြန်လည်လာမယ့် အတုံ့အလှည့်….
YTV ရဲ့ အားကစားသတင်းတွေကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ အားကစားပရိသတ်များကို ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်....ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာ နေးရှင်းလိဂ် အုပ်စုပွဲစဉ် တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ (Group-4) မှ နယ်သာလန်တို့ကတော့ အုပ်စုအဆင့်မှာ ထိပ်ဆုံးကနေဆက်လက်ပြီးဦးဆောင်နေခဲ့ပါတယ်....ဒီကနေ့ကန်တဲ့ ဝေးလ်အသင်းနှင့် ပွဲစဉ်မှာတော့ နယ်သာလန်အသင်းအနေနဲ့ အဓိကကစားသမား အချို့ကိုချန်လှပ်ပြီး ပွဲထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်...ပထမပိုင်း ပြီးဆုံးချိန်ထိ ဂိုးမရှိသရေနှင့်သာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရပြီး ဒုတိယပိုင်း မိနစ် ၅၀ ရောက်မှ နယ်သာလန်တို့ အဖွင့်ဂိုးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်...
နယ်သာလန်ဖက်မှ ဂိုးရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဝေးလ်အသင်းမှ ပြန်လည်ဖိအားပေးကစားလာခဲ့ပေမယ့် ပွဲပြီးခါနီးအထိ အရာမထင်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်...အပြန်အလှန် တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေနဲ့ နာကျင်အချိန်ပို ၅ မိနစ်အရာက်မှာ ဝေးအသင်းမှ အဖိုးတန်ချေပဂိုးကိုပြန်လည်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး နောက်နှစ်မိနစ်အကြာမှာ အိမ်ရှင်တွေအတွက်အသဲခွဲဂိုးကို နယ်သာလန်အသင်းမှ ဝက်ဟော့စ် က ပြန်လည်သွင်းယူခဲ့တာကြောင့် နယ်သာလန်ခြင်္သေ့တွေ ကာဒစ်ကွင်းမှာ အနိုင်သုံးမှတ်ရယူသွားခဲ့ပါတယ်...
အဆိုပါပွဲအပြီးမှာ ဝေးလ်အသင်းမှ ဂါရတ်ဘေးလ်က သူ့အသင်းအတွက်ကံဆိုးမှုတွေကို ပြောကြားသွားခဲ့ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်မှာ အကောင်းဆုံးပြန်လည်ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်...ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ရော ဝေးလ်အသင်းအနေနဲ့ ကာဒစ်ကွင်းက ရှုံးကြွေးကို နယ်သာလန်မြေမှာ အတုံ့အလှည့် ပြန်ဆပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာလေးကို ခန့်မှန်းချက်လေးတွေ ပြောပေးသွားပါဦးနော်....